ဝဘ်ဒီဇိုင်းနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာ Intern | NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » ဂျော့ဘ် » Web Design နှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ International
ယောဘသည်ဖွင့်ပွဲ: Web Design နှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ International
ရာထူး: Web Design နှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ International
ကုမ္ပဏီ: Dynamynd, Inc
Dynamynd Inc ကိုသုတေသန, ဒေတာ analysis နှင့်ကုန်ပစ္စည်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်အထူးပြုကြောင်း Scottsdale, AZ မှာတည်ရှိပါတယ်အနေနဲ့ဆန်းသစ် start-up ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ CEO နဲ့တည်ထောင်သူ, ကေသီ Kolbe လူတိုင်းအညီအမျှ, ဒါပေမယ့်ကွဲပြားခြားနား, ဖန်တီးမှုကြောင်းသက်သေပြခဲ့သည်။ အခြားအအကဲဖြတ်မတူဘဲကျွန်တော်တို့ရဲ့တစ်ဦးကြင်ကြင်နာနာတ၏ထုတ်ကုန်များနှင့်အစီအစဉ်များကိုအသက်အရွယ်, ကျားမ, လူမျိုးရေး, ဒါမှမဟုတ်မသန်စွမ်းခြင်းဖြင့် biased ကြသည်မဟုတ်။ ကျွန်တော်တို့သည်နည်းပညာအစွမ်းသင်ယူဖို့စိတ်အားထက်သန်နှင့်ကြိုးစားလုပ်ကိုင်ဖို့ဆန္ဒရှိသူသည်ဤအကဆြုံးတစ်ခုအလုပ်သင်ဆရာဝန်ရှာကြ၏။ ဒါဟာသင်အနည်းငယ်ကြီးမြတ်တွေးခေါ်ရှင်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ပူးပေါင်း, နှင့်ကမ္ဘာတစ်ဦးကိုမှန်ကန်ခြားနားချက်စေဘို့အခွင့်အလမ်းပါ!
သငျသညျအလုပ်သင်သင်ရုံမိတ္တူအောင်နှင့် "ကော်ဖီပြေး on" သွားပါလိမ့်မည်ဆိုလိုတယ်ထင်နေလျှင်, တဖန်ထင်! ကြှနျုပျတို့နှငျ့အတူသင့်ရဲ့အလုပ်သင်ပုံမှန်ပေမယ့်ဘာမှမဖြစ်လိမ့်မည်။ သငျသညျဦးဆောင်-အစွန်းစီမံကိန်းများနှင့်အစီအစဉ်များမှအဓိကပံ့ပိုးကြလိမ့်မည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံတကာတန်ဖိုးထားခြင်းနှင့်ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖွဲ့ကအကြီးအကျယ်အပျေါမှီခိုနေကြသည်။
Dynamynd မှာ Key ကိုစီမံကိန်းများပါဝင်သည်:
စမ်းသပ်ခြင်းများနှင့်သန့်စင် app များနှင့်ထုတ်ကုန်။
ကျနော်တို့စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနှင့် e-commerce ကိုပေါင်းစည်းရန်သင့်သည့်သဘာဝစွမ်းရည်ကိုလိုအပ်ပါတယ်။ သငျသညျ analytics အပေါ်အခြေခံပြီးအသုံးပြုသူစီးဆင်းမှုတိုးတက်လာဖို့ဘယ်လောက်, အစစ်အမှန်ကမ္ဘာဖှံ့ဖွိုးတိုးလေ့လာသင်ယူမည်, မည်သို့ applications များစမ်းသပ်ရန်နှင့်မွမ်းမံရန်။ အဆိုပါအလုပ်သင်၏အဆုံးအားဖြင့်သင်တို့ကိုမျိုးစုံကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေနဲ့ application များ၏ဒီဇိုင်းနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်တိုးတက်လာကြပါပြီမည်ဖြစ်သည်။ သတ်မှတ်ရက်နှင့်စီမံကိန်းများကိုအလျင်အမြန်ကိုပြောင်းလဲအဖြစ်အောင်မြင်သင်မကြာခဏအဆင့်မြင့်အသိပေးစာမပါဘဲပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ဖြစ်ဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။
သင်စိန်ခေါ်မှုမှတက်ကာကိုမှန်ကန်ခြားနားချက်အောင်မှကျူးလွန်ဖို့ဆန္ဒရှိလျှင်, ယခုသက်ဆိုင်ပါသည်။ ဒါကတစ်ဦးအလုပ်ချိန်နာရီ paid အလုပ်သင်ဖြစ်ပါတယ်။ လျော်ကြေးအတွေ့အကြုံအပေါ်မှီခိုပေမယ် $ 12 / နာရီ၏နိမ့်ဆုံးအခကြေးငွေလိမ့်မည်။
စားဆင်ယင် code ကိုပေါ့ပေါ့ဖြစ်ပါတယ်။
နံပါတ်များနှင့်အတူ Excellent က
အတှေ့အကွုံဖွံ့ဖြိုးဆဲကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေနဲ့ကို web app များကို
MS Office suite ကို
Adobe က Photoshop ကို
ရထားလမ်းပေါ်တွင်ပတ္တမြားအတွေ့အကြုံနိုင်တဲ့ coding တစ်ပေါင်း
အတွေ့အကြုံကိုပိုမိုနှစ်သက်မိုဘိုင်း app များကိုဖွံ့ဖြိုးဆဲ
Google Analytics သည်နှင့် Google AdWords အပေါင်း
Tableau မှာ Data visualization ဆော့ဝဲတစ်ခုပေါင်းတွေ့ကြုံခံစား
ဆက်လက်အလုပ်အကိုင်အဘို့အ 2017- ကမ်းလှမ်းမှုကိုမတိုင်မီအလုပ်သင်၏ပြီးစီးဖို့အကဲဖြတ်ကြလိမ့်မည် Fall ။
အပိုင်းအချိန် / အချိန်ပြည့်အခွင့်အလမ်းများ
လစာ: $ 12.00 မှ $ 14.00 / နာရီ
virtual reality 2017-07-31